आज निर्जला एकादशी, तुलसीको दल राख्ने दिन - टि. एल. एन पोस्ट
Home जानकारी आज निर्जला एकादशी, तुलसीको दल राख्ने दिन
वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले आज आ-आफ्ना घरको मठमा तुलसीको दल राख्दैछन् । प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल एकादशीका दिन घर घरमा तुलसीको बीउ रोपिन्छ ।
आज निर्जला एकादशीमा रोपिएको बीउ एक महिनापछि तुलसीहरुको अंकुरण भएसँगै आषाढ शुक्ल एकादशी अर्थात् हरि शयनी एकादशीका दिन रोपिन्छ । निर्जला अर्थात जलबिनाको एकादशी, यस एकादशीलाई जल बिना व्रत लिने गरेर भक्तिपूर्वक पालना गरिन्छ। वर्षभरीका एकादशी तिथीको पुण्य प्राप्त हुने विश्‍वासमा आज पानी पनि नखाई ब्रत बस्ने र भगवान विष्णुको पूजा गर्ने चलन छ।
स्नान, पूजन र दान गर्नाले मनोकाङ्क्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ । आज पानीसमेत नपिई व्रत गर्नाले अभीष्ट फल पाइने शास्त्रीय वचन रहेको पनि मान्यता छ । आयुर्वेदिक रुपमा पनि लाभकारी औषधि तुलसी विभिन्न रोगको उपचारमा प्रयोग गरिन्छ । तुलसीमा धेरै अक्सिजन पाइने आधुनिक विज्ञानले समेत प्रमाणित गरेको छ ।
Previous articleआजकाे माैसम : यी ठाउँमा भारी वर्षा हुने भएकाले सतर्क रहन अनुराेध
Next articleयस्तो छ निषेधाज्ञाबारे जारी नयाँ आदेश : कुन बार कस्ता पसल खुल्छन् ? (आदेश सहित )
त्रिभुवन विमानस्थलमा शंकास्पद वस्तु रहेको आशंका, विमानस्थलमा बम राखिएको फोन आएपछि यात्रुलाई बाहिर निकालियो